Dariiqii Dheeraa ee Sooyaalka Somaliland iyo 30-guurrada 2021..Q1aad.Qore. Saleeban Kalshaale. |
Waa maalmo kale, Taariikh ma guurto ah, mucjiso Geeska Afrika laambad Iftiin weyn u shiday, Dhawaaq sidda dhambaal culus oo dunida ku socda iyo dhamaadka dharaarro sedkoodu buuxsamay oo foollanaya.
Mar kale, waa meerto xusuus u ah mahadhooyin laba qarni soo taxnaa oo taagan marxalad kale oo kala wareeg ah, xilli miidaanka geedigu ku fool leeyahay qormo iyo qeerraaro tigaad iyo taran leh oo toobiyihiisuna yahay mid si fiican loo sahamiyey.
Mar kalena, higilka iyo humaagga is-huwan ee Mandaqada hadheeyey waa ifafaale muujinaya cadceed cusub u soo baxaysa dunida qayb kamida iyo midho-dhalka mabda’ii dib u soo noqoshada madaxbanaanida Jamhuuriyadda Somaliland, taasoo nabad, horumar iyo dawladnimo meel hoose laga soo unkay ku soo gaadhay sanad-guuraddii 30-aad.
Sidaasi, darteed akhristeyaal qormadani waxa ay ibo-fur u tahay mowduucyo dib-u-milicsi taariikheed ku saabsan oo Wargeyska Dawan si taxane ah idiinku soo gudbin doono usbuucyada soo socda, taasoo aynu ku lafa-guri doono Sooyaalkii dheeraa ee Somaliland, jaranjarooyinkii lagu xaqiijiyey dib-ula-soo noqoshada Xoriyada 30-guuraddeeda aynu u dabaal-degayno iyo saadaasha mustaqbalka.
Haddaba, Taariikhda madaxbanaanida Jamhuuriyadda Somaliland ma waxay ka soo bilaabmaysaa 1991-kii? ma waxa jira taariikh ka horaysay oo ay dawlad madaxbanaan ahayd? maxase sabab u ahaa israacii dhex maray Somaliland iyo Soomaaliya 1960-kii? goormuuse israacaasi burburay? yaase fashiliyey? ka hor intii aanay gumaysteyaasha reer Yurub imanin dhulka Soomaalida, Somaliland ma waxay ahayd dal gaar ah oo ay ku noolaayeen Dad Soomaaliyeed, mise waxay ahayd deegaan kamida wax la yidhaahdo Soomaaliya?
Goormuu Magaca Somaliland baxay ma markii gooni-isu-taaggu yimi 1991-kii, mise wuu ka horeeyey?
Su’aallahan iyo kuwo kale oo badan oo ay dhici karto inaad haysaan jawaabahooda saxda ah, waxa aynu haddii alle ka dhigo ku lafo-guri doonaa qormooyinkan, iyadoo aynu u kala qaadayno afar qaybood oo mid waliba wakhti iyo wadci gaar ah leeyahay, taasoo aqoon-korodhsi u noqonaysa da’yarta maanta, dhigaalna u ah jiilka soo socda.
Sidaasi awgeed, Jamhuuriyadda Somaliland waxa leedahay afar taariikhood oo kala dambeeyey, kuwaasoo saddex kamid ahi ay leeyihiin raad-raacyo muuqda, mida afaraadna sheeko afeed mooyaane macluumaadka laga hayaa kooban yahay.
Afartan taariikhood ayey u kala qaadaynaa:
1.Somaliland-tii jirtay Gumaysteyaasha ka hor
2.Somaliland-tii Maxbiyada Ingiriisku maamulaysay
3.Somaliland-tii Xornimada qaadatay 1960-kii
4.Somaliland-tii Madaxbanaanideeda dib ula soo noqotay 1991-kii.
Sida boggaga Taariikhda ku xusan, Puntland wxay ahayd dawladii ugu horaysay ee ku taalay dhulka ay Somaliland ku taallo , Puntland ama Land of Punt micnaheedu waxa uu yahay dhulkii uduga. waxa kale oo lagu sheegaa dhulkii Ilaahyada (Wal ciyaadu bilaah) Sida ku cad Khariidadaha ku jiga boggaga taariikhaha lagu kaydiyo, waxaana xusid mudan inaanay Dhulkaas ku jirin wax la yidhaahdo Soomaliya.
Qarniyadii dhexe waxa jirtay Saldanadii Islaamiga ahayd ee IFAT oo waqooyi bari geeska Afrika xukumaysay intii u dhaxaysay qarniyadii 13aad iyo 15aad, taasoo uu ka talinaayey Qoyskii WALASHMA, caasimadeeduna waxay ahayd Magaalada Saylac ,waxaa lagaga hadli jiray afafka Harari, Carabi iyo Soomaali.
Waxa ku xigtay Saldanadii AWDAL ee iyaduna Islaamiga ahayd, kuna taalay geeska Afrika waxa aasaasay Sabru diin kii 2aad, waxaanay Saladanadaasi jirtay intii u dhaxaysay 1415 illa 1577-kii, Caasimadeeduna Saylac bay ahayd waxaana lagaga hadli jiray Harari ,Carabi, Cafar iyo Soomaali.
Dawladdii afaraad ee Somaliland ka jirtay waxay ahayd CUSMAANIYADII SAYLAC , waxay Xukumi jirtay dhul Caasimada Saylac hareeraheeda ah oo hoos iman jirtay Boqortooyadii Cusmaaniyada qaranigii 16 aad.
Maamulladii Saldanadahani waxa ay tilmaan buuxda ka bixinayaan in Dhulka Jamhuuriyadda Somaliland uu lahaa nidaam iyo maamullo hogaamin jiray Bulshada, waxaana diwaanka taariikhaha ku jira khariidada dhulkii ay Dawlad waliba xukumi jirtay, laga soo bilaabo Saldanadii IFAD ilaa Cusmaaniyaddii.
Haddii aynu intaasi ku barqano qodobka ugu horeeya afarta qaybood ee aynu u qaybinay Taariikhda Somaliland, iyadoo aynu si guud u kor-xaadinay, dhamaadkii qarnigii 18-aad iyo bilowgii kii 19-aad, waxay ahaayeen bilashada millaygii xukunka gumaysteyaaasha reer Yurub.
Si’ guud dhulka Soomaalida oo ay Somaliland ku jirto waxa ay u qaybsadeen saddex gobol, kuwaasoo dal kastaaba ugu yeedhi jiray magac ku turjuman luuqadiisa gaarka ah, kuna calaamadsaday badkiisa dhulleed khariidad gooni ah.
Waxaanay u qabiyeen sidan:
A. Magacyada Talyaanigu ugu yeedhi jiray.
Somalia Francese ( Waa Jabutida maanta)
Somalia Britannica ( waa Jamhuuriyada Somaliland ee maanta)
Somalia Italiana ( Waa Soomaaliyada maanta Ex Koonfur)
French Somaliland( waa Jabuutida maanta)
British Somaliland ( waa jamhuuriyadda Somaliland ee Maanta)
Italian Somaliland ( Waa Somaliyada Maanta ex koonfur)
Somalie Francaise ( waa Jabuutida Maanta) Ex Côte française de Somalie.
Somalie Anglaise (Somaliland) ama Britanique
Somalie Italienne (Somalia Ex koonfur).
La soco qormooyinka dambe